WARBIXIN: Coutinho,Neymar,Zidane,Pogba & 10 Xiddig Ee Kooxihii iibiyay Ay Jeebka Ku Shubteen Lacag Badan Oo Faa,iido Ah – Kooxda.com
Home 2018 January France, Ingiriiska, Italy, Jarmalka, Spain, Wararka Maanta, Warbixinada Ugu Xiisaha Badan, Warbixino WARBIXIN: Coutinho,Neymar,Zidane,Pogba & 10 Xiddig Ee Kooxihii iibiyay Ay Jeebka Ku Shubteen Lacag Badan Oo Faa,iido Ah
WARBIXIN: Coutinho,Neymar,Zidane,Pogba & 10 Xiddig Ee Kooxihii iibiyay Ay Jeebka Ku Shubteen Lacag Badan Oo Faa,iido Ah
January 10, 2018 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Inkasta oo ay wayday xiddig muhiim u ah hadana kooxda Liverpool ayaan ku khasaarin waayitaanka xiddiga reer Brazil ee Philippe Coutinho.
Ku biiristii Coutinho uu 145 milyan ugu biiray kooxda reer spain ayaa Reds ka dhigtay in ay faa,iido fiican ka heshay iibka xiddiga oo ay lacag jaban ugula soo wareegtay sanadkii 2013.
Xilli aan Coutinho laga aqoon adduunka tababare Brendan Rodgers ayaa kooxda Liverpool ku keenay kaliya lacag dhan 8.5 xilli uu haatan noqday xiddiga 2-aad ee ugu qaalisan suuqa kala iibsiga.
Kooxda Barcelona aya kaalinta 1-aad kaga jirta kooxaha faa,iidada ugu badan ka helay xiddigaha ay iibiyaan
Hadaba waxa aanu warbixintan ku soo gudbin doonaa kooxaha faa,iidada ugu badan ka helay xiddigaha ay iibiyeen:
1) Barcelona (2017) – NEYMAR
Barcelona – PSG – £198m (2017)
Intii uu joogay Barcelona: 4 sano
Faa,iido = £149m
Neymar ayaa kooxda reer France ee PSG ugu biiray rikoorka heshiiska ugu qaalisan suuqa kala iibsiga xagaagii la soo dhaafay isaga oo ugu biiray lacag dhan 198 milyan euro halka ay markii hore kaliya ku soo iibsatay lacag dhan 49 milyan oo euro taas ayaa la macno ah in ay faa,iido u heshay lacag dhan 149 milyan euro.
2) Liverpool (2018) – PHILIPPE COUTINHO
Intii uu joogay Liverpool: 5
Faa,iido = £136.5m
Liverpool ayaa xiddiga reer Brazil la soo saxiixatay sanadkii 2013 iyada oo kaliya 8 milyan oo euro uga soo qaadatay kooxda Inter Milan waxana uu noqday xiddigaha ugu fiican adduunka.
Liverpool ayaa si aad ah u doonaysa in ay u sii haysato xiddiga laaiin kooxda Barcelona ayay ka go,nayd in ay helaan xiddiga waxana ay ugu dambayn ka heshay faa,iido dhan 136.5 milayn euro.
3) Juventus (2016) – PAUL POGBA
Manchester United – Juventus Xor (2012)
Intii uu joogay Juventus: 4
Pogba ayaa go,aansaday in uu isaga tago kooxda Man United sanadkii 2012 markii uu ku dhibaatooday in uu boos joogto ah ka helo kooxda Red Devils.
Xiddiga ayaa ku biiray kooxda Juventus isaga oo waliba ka mid noqday xiddigaha ugu fiican adduunka khadka dhexe ka ciyaara.
Xiddiga reer France ayaa ku soo laabtay bilowgii xilli ciyaareedkii hore waxana uu kooxda Juventus jeebka ugu shubay lacag dhan 89 milyan euro oo faa,iido ah.
4) Borussia Dortmund (2017) – OUSMANE DEMBELE
Intii uu joogay Borussia Dortmund : 1
Faa,iido = £81m
Kooxda Dortmund ayaa kaliya Ousmane Dembele haysatay xilli ciyaareed kaliya oo uu u dhaliyay 10 gool iyo 20 caawin tartamada oo dhan waxana uu Ku biiray kooxda Barcelona xagaagii la soo dhaafay.
Kooxda reer Germany ayaa lacag fiican ka heshay laakiin 25% lacagta lagu iibiyay waxa iska lahayd kooxda Rennes oo uu ka yimid markii hore.
5) Tottenham (2013) – GARETH BALE
Inta uu joogy Tottenham: 7
Faa,iido = £76m
Southampton ayaa si la mid ah Rennes xiddigan ku xirtay heshiiskiisa lacagta lagu iibiyo in ay helaan lacag dhan 25% waxana uu sanadkii 2013 ugu biiray kooxda Real Madrid lacag dhan 86 milyan euro.
Bale ayaa wakhtigaas ahaa xiddig ugu qaalisan suuqa kala iibsiga maadama uuna suuqu ahayn mid u waalan sida uu haatan u waalan yahay ama lacagaha waalida ah lagu iibsanayo xiddigaha.
6) Manchester United (2009) – CRISTIANO RONALDO
Sporting Lisbon – Manchester United £17m (2003)
Manchester United – Real Madrid £80m (2009)
Inta uu u joogay Manchester United: 6
Xiddigan reer Portugal ayaa wakhtigiisii kooxda Man United ku biiray Real Madrid isaga oo lagu iibsaday lacag aad u badan inkasta oo ay United ku soo iibsatay kalita 17 milyan oo euro.
Xiddigan oo guulo la gaaray kooxda Man United ayaa snaadkii 2009 ku biiray kooxda Los Blancos isaga oo ugu biiray lacag dhan 80 milyan oo euro taas oo la macno ah in ay United faamiido u heshay 63 milyan oo euro.
7) Southampton (2018) – VIRGIL VAN DIJK
Celtic – Southampton £13m (2015)
Southampton – Liverpool £75m (2018)
Inta uu joogay Southampton: 2 iyo bar
Faa,iido = £62m
Kooxda Southampton ayaa mar kale iibsiay mid ka mid ahdaafacyada ugu fiican laakiin waxa ay ka taabatay lacag fiican kadib markii uu noqday daafaca ugu qaalisan suuqa kala iibsiga.
Southampton ayaa markii ay soo iibsanaysay kaliya ku soo iibsatay xiddiga 13 milyan oo euro waxana ay markii dambe ka faa,iiday lacag dhan 62 milyan oo euro.
8) Liverpool (2014) – LUIS SUAREZ
Ajax – Liverpool £22.8m (2011)
Liverpool – Barcelona £75m (2014)
Intii uu jooga Liverpool: 3 iyo bar
Faa,iido = £52.2m
Liverpool ayaa mar kale soo heshootay xiddig heer caalami ah kadib markii ay Ajax kala soo wareegtay Luis suarez iyada oo ka soo bixisay lacag dhan 22.8 milyan euro.
Suarez ayaa wakhti fiican ku soo qaatay Liverpool isaga oo ka mid noqday weeraryahankada ugu fiican premier league iyo waliba yurub.
Laakiin xiddigan ayaa sanadkii 2014 ku biiray kooxda Barcelona isaga oo ugu biiray lacag dhan 75 milyan oo euro waxana ay Liverpool faa,iido ahaan ka heshay 52.2 milyan euro.
9) Juventus (2001) – ZINEDINE ZIDANE
Bordeaux – Juventus £3m (1996)
Juventus – Real Madrid £48m (2001)
Inta uu Joogay Juventus: Five
Faa,iido = £45m
Waa xiddig kale oo ay Real Madrid rikoorka u jabisay si ay u hesho adeegiisa waxana ay sanadkii 2001 gacanta ku dhigtay Zidane oo joogay Juventus.
Zidane ayaa sanadkii 1996 kaga biiray kooxda Juventus horyaalka France waxana ay kaliya ka bixisay lacag dhan 3 milyan oo euro.
Laakiin kadib 5 sano waxa uu 48 milyan oo euro ugu biiray kooxda Real Madrid taas oo la macno ah in Juventus 45 milyan ka faa,iiday iibkiisa.
10) Everton (2017) – ROMELU LUKAKU
Chelsea – Everton £28m (2014)
Everton – Manchester United £75m (2017)
Inta uu jooga Everton: 3
Kooxda Everton ayaa Romelu Lukak ka bixisay lacag dhan 28 milyan oo euro waxana uu Lukaku ka mid noqday weeraryahanada ugu halisan premier league.
Si kasta ha ahaatee Man United ayaa xagaagii hore ka dhigtay xiddiga ugu qaalisan ee laga dhex iibsado England waxana ay ka bixisay lacag dhan 75 milyan waxana ay Everton ka heshay 40 milyan oo faa,iido ah.
Hordhacyada: Germany Vs Spain, Italy Vs Argentina, Holland Vs England & Kulamada Ee La Ciyaari Doono